Hetsika amin'ny 2 Oktobra 2019 - The World March
02 / 10 / 2019 2 octubre 2019
Jujuy, Arzantina Jujui
Fialantsasatr'izao tontolo izao ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fisian'ny asa
Boribory amin'ny zavakanto kanto, Madrid C / Alcalá 42- 5th gorodona, Madrid
Fanokafana ny andro martsa manerantany maneran-tany ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fahatoniana. Miaraka amin'ny hetsika institiota sy mpandray anjara ao amin'ny Ateneo de Madrid. Fikomiana sary sy horonan-tsary amin'ny diabe voalohany sy ny hetsika fanomanana ny faharoa.Miafina: Fahatanterahany ny mariky ny fandriampahalemana sy ny olombelona
Andro NoViolence iraisam-pirenena
Tany planeta Tany planeta
Andro iraisam-pirenena tsy fandeferana nataon'ny Firenena Mikambana.
Fanolorana ny volana martsa tao Plaza Independencia, Mendoza
Kianjan'ny fahaleovantena Mendoza Plaza Independencia de Mendoza, Mendoza
Fanolorana ny volana martsa tao Plaza Independencia.
Fanolorana ny martsa manerantany, Fiumicelo Villa Vicentina
Bison Complex, Fiumicelo Villa Vicentina Via Gramsci, 8 taona, Fiumicelo Villa Vicentina
10: Hetsika 30 ho an'ny Sekoly 1 ao amin'ny FIUMICELO VILLA VICENTINA Fampisehoana ny Diabe ho an'ny fiadanana sy ny tsy fahatsiarovan-tsarimihetsika: "GANDHI" nataon'i Richard Attenboroungh 20: Inoatif 30 ho an'ny olom-pirenena rehetra Fandriampahalemana sy tsy fahatomombanana ary fandefasana ilay sarimihetsika: «Ny fitsipiky ny
2 Oktobra 2019 @ 08: 00-09: 00 CEST
Ny fandefasana boky boky, Bilbao
Saure Publishing House dia mikarakara ny "Operation bookcrossing of comics". Ny mpamoaka Saure dia hizara «comise» 500 maimaimpoana. Ity hetsika ity dia ho vita ao anatin'ny 2 World martsa. Ny fahatanterahany ny 3 sary nalaina tamin'ny lafiny roa amin'ny 2 World March dia hambara, amin'ny alàlan'ny boky fitsangatsanganana amin'ny: ranomasina fitoniana am-pilaminana, fihaonana
2 Oktobra 2019 @ 09: 00-20: 00 CEST
Hetsika "Eny an-dàlana mankany amin'ny tsy fandriampahalemana"
Eny an-dàlambe tsy fahatsiarovana BiblioteCanova dell'Isolotto Via Chiusi 4 / 3A 9: 00 am - Fomba fandriampahalemana mankany amin'ny .... ny BiblioteCaNova! Fihaonana tany Piazza Isolotto amin'ireo zanaky ny sekoly manodidina ary miala amin'ny diabe 10: 00 am - Tonga any amin'ny Tranombokim-boky: fandraisana an-tsaina miaraka amin'ny Sonati della Pirandello ary atrikasa ho an'ny
2 Oktobra 2019 @ 09: 00-11: 00 CEST
Forum Forum momba ny sinema 2ª World March and Nonviolence Day
Gran Base Misiones nataon'i Pinto Salinas, Av. Andrés Bello, Caracas Misiones Grand Base of Pinto Salinas - Av. Andrés Bello, Caracas
Forum Forum momba ny fanombohana ny 2 World martsa sy ny Andro iraisam-pirenena amin'ny tsy fanarahan-dalàna.
2 Oktobra 2019 @ 09: 00-10: 00 CST
Fihaonambe mpanao gazety, Guatemala
Guatemalan Post, Telegraph ary Museum Museum Museo Correos, Telégrafos y Filatelia, Guatemala
Kaonferansa ho an'ny mpanao gazety hampahafantarana momba ny fanombohana ny 2 World March for Peace and Nonviolence. Ny maha-Fahasamihafana antsika ho mpanosika fandriampahalemana.
2 Oktobra 2019 @ 09: 00-11: 00 CST
Fankalazana sy valandresaka ho an'ny mpanao gazety, San José
Manasa anao izahay hankany amin'ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena tsy fanarahan-dalàna sy ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety mba hampahafantarana ny fialan'ny 2 World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana. Anio Alarobia 2 tamin'ny Oktobra Oktobra 9: 00 am mankany amin'ny 11: 00 am Ao amin'ny Kiora Morazán Park. Hanana hetsika ara-kolotsaina isika
2 Oktobra 2019 @ 09: 00-13: 00 CEST
Nahita sekoly Italiana sy Slovenianina any Muggia aho
Sekolin'i Nazario Sauro ao Muggia Via D'Annunzio 48, Muggia
Ny 2 Oktobra dia Andro tsy miankina amin'ny Firenena Mikambana ho tsingerintaona nahaterahan'i Gandhi. Ny 2 tamin'ny Oktobra tamin'ity taona ity dia manomboka any Madrid ho an'ny World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana, mandalo ny kontinanta rehetra ary miverina any Madrid amin'ny martsa 8
2 Oktobra 2019 @ 09: 30-10: 35 CEST
Fanolorana sy fanombohana ny martsa 2 World martsa ao Magdalena del Mar
Kianja Tupac Amaru - Magdalena del Mar Tupac Amaru Square, Magdalena del Mar
09: 30 Fahatongavan'ny Delegations 10: 00 Famelabelarana ny mozika isa. 10: Fampisehoana 10 momba an'i Taichi. 10: Ny tenin'ny Ben'ny tanànan'i Magdalena del Mar, ny Dr. Carlomagno Chacón. 15: Ny tenin'i 10 an'ny Miss Brenda Vargas, mpandrindra ny hetsika ara-ekolojika "FRIDAY HO AN'ANDRIAMANITRA FOANA" 25: 10 Tenin'i Ramatoa Mariela Lerzundi Escudero, avy amin'ny "TONTOLO IZAO TSY MISY TRANO ARY TSY MISY INDRINDRA"
2 Oktobra 2019 @ 10: 00-13: 00 CEST
Fankalazana ny andro tsy misy herisetra, La Paz
Atrium an'ny UMSA, La Paz Atrium an'ny UMSA, La Paz
Fankalazana ny Andro tsy misy herisetra, fanombohana amin'ny 2 World martsa ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fandeferana.
2 Oktobra 2019 @ 12: 00-12: 30 CMT
Fandaharana amin'ny Radio amin'ny Radio
Sekolin'i Jacques Yves Costeau, Salta Sekolin'i Jacques Yves Costeau, Salta
Andro tsy fandefasana. Fandaharana amin'ny radio (15 min) miaraka amin'ny mpianatra Jacques Cousteau ao amin'ny Radio Radio.
2 Oktobra 2019 @ 12: 00-13: 00 CEST
Famelabelarana momba ny andrimpanjakana ao amin'ny City City, Coruña
Lapan'i María Pita Municipal Praza de María Pita, S / N,, A Coruña
Ny martsa maneran-tany 2 ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fanoloran-tena dia natolotry ny ben'ny tanàna, Inés Rey tao amin'ny lapan'ny tanàna. Ny mpitondra tenin'ny martsa, Marisa Fernández, ary ny mpitantana ny oniversite, Julio Abalde, dia nandray anjara tamin'ny hetsika. Ny filankevitry ny tanànan'i A Coruña dia nanatevin-daharana ny volana martsa lasa teo
2 Oktobra 2019 @ 13: 00-18: 00 CEST
Andro iraisam-pirenena tsy fanarahan-dalàna, El Bolsón
Fankalazana ny andro tsy misy herisetra. Misokatra andro manidina eny amin'ny Plaza Eva Perón, manomboka amin'ny 13 mankany 18hs. Fanolorana ny Aikidoka, Tai Chi, yoga sy fanasitranana betsaka. Miresaka momba ny sakafo mahasalama. Miresaka momba an'i Silo, Gandhi ary Luther King.- Sarin'ny olombelona amin'ny fandriam-pahalemana. Mpihira mozika - Sakafo an-tsaha.
2 Oktobra 2019 @ 16: 00-16: 50 CEST
Km 0 ny martsa maneran-tany
Kilometer 0, Madrid Kilometatra 0, Madrid, Madrid
- Km 0 an'ny MM, fanombohan'ny diany mitety ny planeta. Fankatoavana an'i Madrid, renivohitr'i Paz. - Fihetsika an'ohatra amin'ny fanekena ny 15M ho toy ny fanentanana olona tsy manan-kery. Adikao izy: Program an'ny hetsika taloha sy ny fanombohana ny 2 World March ny 2 tamin'ny Oktobra 2019 tany Madrid
2 Oktobra 2019 @ 16: 00-18: 00 CEST
Fikatsoana ny "fiandohan'ny faran'ny fitaovam-piadiana niokleary", San José
Fanatanterahana ny "fiandohan'ny faran'ny fitaovam-piadiana niokleary", tao amin'ny National University of Costa Rica UNA Heredia 4º Lafon'ny Center for General Studies, efitrano fianarana 105
2 Oktobra 2019 @ 16: 30-18: 30 CMT
Sambo ao amin'ny Tranombakoka Genaro Pérez, Córdoba
Museum Museum Genaro Pérez, Córdoba Museum Museum Genaro Pérez, Córdoba
Tetikasa ny "fanombohan'ny fiafaran'ny fitaovam-piadiana niokleary" ao amin'ny Museo Genaro Pérez. Adihevitra manaraka
2 Oktobra 2019 @ 17: 00-22: 00 CEST
1ª Andronisa Andro ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fandriampahalemana, Palermo
Ny 2 tamin'ny Oktobra of 2019 dia nankalaza ny andro 1ª Sicilian ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana ao Palermo. Ao Villa Niscemi, Palermo ao amin'ny 17: 00.
2 Oktobra 2019 @ 17: 30-19: 30 UTC + 1
Colloquium "Nonviolence ho fihetsika sy fanovana fihetsika"
FNAC - Palladium Building, Porto Rua de Santa Catarina, 73 taona, Porto
Symposium hanamarihana ny "Andro iraisam-pirenena amin'ny NoViolence" ao an-tanànan'i Porto, Portugal. Miaraka amin'ny fandraisana anjara ho mpandahateny an'ny: Luis Guerra (World Center for Humanist Studies) Clara Tur Munoz (Catalan National Catalan) João Rapagão (mpampianatra ny mpikaroka ao amin'ny oniversite) Mpikambana: Sérgio Freitas (mpanao gazety) Ny colloquium dia hialoha ny famelabelarana ny «2 ny diabe
2 Oktobra 2019 @ 18: 00-20: 00 CEST
Famolavolana ao amin'ny Ivotoerana Kolontsaina Orestes Caviglia, Tucumán
Orestes Caviglia C Center Center, Tucumán Orestes Caviglia C Center Center, Tucumán
Ny fandinihana ny horonantsary "Ny fiandohan'ny faran'ny fitaovam-piadiana niokleary" - Centro Cultural Orestes Caviglia.
2 Oktobra 2019 @ 20: 00-21: 30 CEST
Natomboka tamin'ny fomba ofisialy 2-MM amin'ny A Coruña
Ivontoerana ho an'ny "Centre Sociocultural Centre" ÁGORA Mametraka Gramela, 17 taona, A Coruña
Hetsika ofisialy amin'ny fanombohan'ny "2 World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriam-pahalemana" sy famelabelarana ny Initiatives izay hapetraka ao amin'ny tanànan'i A Coruña. Manasa anao izahay ho tonga hankafy sy handray anjara amin'ity hetsika ity. Aoka isika an-tapitrisany hiatrika ny herisetra ao amin'ity
2 Oktobra 2019 @ 20: 00-21: 00 CEST
Sarin'olombelona amin'ny tsy fandeferana, Toulouse
Amin'ny Andro iraisam-pirenena tsy manam-paharetana dia hahatsapa mariky ny tsy fandevenana ny olombelona isika.
2 Oktobra 2019 @ 20: 30-22: 30 CEST
Fifandraisana iraisam-pirenena amin'ny World March, Vicenza
Porto Burci, Contra Burci, 27 - Vicenza Porto Burci, Contra Burci, 27 taona, Vicenza
Fifandraisana iraisam-pirenena amin'ny World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandeferana, miaraka amin'ny fandraisan'i David Swanson.